Ama-hormone alawula ushukela wegazi > Insulin
I-glucose elawula i-hormone: yini eyehlisa futhi iphakamise ushukela?
I-insulin yi-hormone ye-pancreatic esehlisa ushukela wegazi. Isebenza njenge "opener emnyango" ye-glucose esitokisini. I-insulin ibalulekile emzimbeni futhi inikelwe engxenyeni ehlukile "I-insulin nokubaluleka kwayo ngomzimba."
I-Glucagon, i-adrenaline, i-cortisol, i-hormone yokukhula - ama-hormone akhulisa ushukela wegazi. Okuningi mayelana ngamunye wabo kusihloko.
I-hormone yokukhula ikhiqizwa i-pituitary gland, etholakala ngaphansi kwengqondo (Fig. 5).
Umsebenzi oyinhloko we-hormone yokukhula ukuvusa ukukhula. Iphinde inyuse ushukela wegazi ngokunciphisa ukuthathwa kwe-glucose ngamangqamuzana omzimba. I-hormone yokukhula iholela ekwandeni kwezicubu zomzimba kanye nokwanda kokuwohloka kwamafutha.
Ngesikhathi sokuthomba, lapho intsha ikhula ngokushesha, iba nezinga elikhulu le-hormone yokukhula, ngenxa yalokho, lokhu kuholela ekwandeni kwesidingo se-insulin.
Umkhiqizo "wokukhanya kokusa" noma "wokusa kokusa"
Kuwo wonke ama-hormone ama-anti-hormonal, ukuphuma kwesiqongo kwenzeka ngezikhathi zasekuseni. Ngakho-ke, abantu abanesifo sikashukela sohlobo loku-1 banokwenyuka kwe-glucose yegazi kusuka cishe ku-3-4 kuya ku-7-8 ekuseni, futhi bangavuka ekuseni nge-glucose ephezulu yegazi. Funda kabanzi ngendaba yokusa yokusa lapha.
Ukudla ukuze ukhule. Ingxenye 4 - Ama-Carbohydrate
Sawubona Siyaqhubeka nokubhekana nezakhi zokudla kokukhula kanye nama-carbohydrate ngokulandelana.
Ungamangala ukuthola ukuthi elinye lamaphutha ajwayelekile abantu abaningi abakwenzayo ukukhulisa ukukhula kwabo ukuthi afaka ama-carbohydrate amaningi ayingozi ekudleni kwabo.
Kungani lokhu kungavimba ukukhula komzimba? Yimaphi ama-carbohydrate okufanele adliwe ukuze angonakalisi, kepha ukuthuthukisa ukugcinwa kwamahomoni ikakhulukazi, ukukhula kwehomoni? Le yi-athikili yami.
Ama-carbohydrate angumthombo oyisisekelo wamandla womzimba womuntu. Umzimba wethu uphula i-carbohydrate ushukela olula, ngaleyo ndlela uthola amandla okukhula, ukuthuthuka njalonjalo. Inqubo yokuhlukanisa izinhlobo ezahlukene zama-carbohydrate zenzeka ngezindlela ezihlukile. Imiphumela yale nqubo ihlukile.
Ngeke ngidonse isikhathi eside, ngakho-ke kuze kube seqophelweni. Ukudla okuphezulu kuma-carbohydrate, ikakhulukazi lawo asezingeni eliphansi, empeleni kungadala ukukhula komzimba okuhamba kancane.
Inani elikhulu lemikhiqizo ye-carbohydrate esetshenzisiwe ekudleni kwezakhamizi zamazwe ase-Asia, ngokusho kwabanye ochwepheshe, ngesinye sezizathu ezibalulekile zokwehla okuphakathi (uma kuqhathaniswa neYurophu neMelika) ukukhula okuphakathi kula mazwe.
Imikhiqizo ejwayele ukusetshenziswa emazweni ase-Asia (okusanhlamvu nezitsha zokudla okusanhlamvu) inothile kakhulu kuma-carbohydrate, kuyilapho iqukethe ezinye izinto ezimbalwa ezilusizo zokwakha umzimba.
Lesi simo sikhulu kuphela ukuthi imikhiqizo enjalo ethandwayo lapho njengelayisi iyenziwa futhi ihlanziwe igobolondo, eliqukethe izinzuzo zokusanhlamvu ezifika ku-95%. Ngemuva kokucutshungulwa, okusanhlamvu kuhlala ikakhulu ama-carbohydrate. Hhayi ikhwalithi ehamba phambili ngaphandle kwalokho.
Ngokushesha udinga ukubhala amagama ambalwa mayelana ne-glycemic index (GI) yemikhiqizo. Kungcono uma uyicabangela lapho udweba indlela yokudla ukuze ikhule. I-GI iyinkomba yokuthi ama-carbohydrate adliwe ngokushesha azongena kanjani ohlelweni lokujikeleza kwegazi futhi andise ushukela wegazi. Inqubo ingathatha imizuzu eminingana iye emahoreni ambalwa futhi kuya ngohlobo lokudla okudlile.
Inkomba ye-glycemic ikalwa ngezinga elikhethekile. Inani layo elamukelekayo, ngokwesibonelo, phakathi kwabakhi bomzimba liyabhekwa: cishe i-60 yokudla okuhleliwe kanye nama-70 kokusha. Kungani kunjalo, ngizochaza ngokuqhubekayo.
Ama-carbohydrate lapho imikhiqizo ingcono
Ngakho-ke, mayelana nama-carbohydrate asezingeni eliphansi kanye nenkomba ye-glycemic uthe. Manje ngemikhiqizo equkethe ama-carbohydrate asezingeni eliphakeme. Ama-carbohydrate amahle kakhulu atholakala kumajikijolo amasha, izithelo, imifino, okubi kakhulu - ezinkomeni nasezinolweni. Le mikhiqizo kufanele yenziwe isisekelo sokudla kwabo i-carbohydrate. Ngani?
Okokuqala, ushukela okuvela kulemikhiqizo kulula ukugaya. Okwesibili, ayigcwalisi izindlala ezikhiqiza ama-hormone. Okwesithathu, le mikhiqizo ihlala ine-GI ephansi futhi ingeqi isilinganiso esivunyelwe sama-70. Okwesine, ngaphezu kwama-carbohydrate asezingeni eliphakeme, aqukethe izinto eziningi ezilusizo ekukhuleni. Kafushane nje.
Ingabe ushukela esithelweni futhi uhlanjululwe yinto efanayo?
Imvamisa ngizwa kubantu (futhi nami uqobo ngake ngacabanga kanjalo) ukuthi ushukela ovela kuzithelo noshukela ojwayelekile ocolisisiwe, ngokwesibonelo, kusuka kumaswidi, kuyafana. Ukwakheka kwamangqamuzana kuyafana futhi zombili ziguqukela kushukela ngokuqhekeka, kepha kunomehluko.
I-confectionery nokunye ukudla okungenamsoco kuqukethe amafutha (sawubona, ushukela), kanye nama-sucrose aphindwe kaninginingi ekwakhiweni kwawo kunezithelo ezintsha “ezinoshukela”. Ukucacisa lesi simo, udinga ukwenza ukudaya okubalulekile futhi ukhulume ngomthwalo we-glycemic.
Emlonyeni womuntu kunama-receptors abhekele ukulawulwa kwe-insulin ye-hormone. Lapho noma yikuphi ukudla okune-carbohydrate kungena emlonyeni, ama-receptors kumele akuqaphele futhi anikeze isibonakaliso ebuchosheni ngokuthi kungakanani i-insulin efihliwe ukuze ikuphule. Imikhiqizo ecolisisiwe ayingeni kule nqubo.
Ama-Receptors awakuqondi ukuthi kudliwe, awukwazi ukubala inani le-insulin bese kuthunyelwa ngokweqile. Lapho inani elikhulu le-insulin lisegazini, lithatha lonke ushukela laphaya, ngakho-ke umuzwa wendlala uphinde ufike ngokushesha okukhulu. Ngasikhathi sinye, ingxenye ye-insulin ihlala egazini isikhathi eside.
Ngakho-ke, emikhiqizweni ehlanziwe kukhona umthwalo omkhulu we-glycemic nokuqhuma okubukhali kwe-insulin.
Ama-Receptors aqaphela kalula ushukela kuma-carbohydrate asezingeni eliphakeme, umphumela we-insulin awunamandla kangako, kunamafutha amancane kuwo, futhi i-sucrose ingena emzimbeni nge-fiber ephilayo, ngokulandelana, ukuvuza okuncane kwe-hormonal kanye nezinzuzo eziningi. Umthwalo we-glycemic uphansi, kepha akupheleli lokho. I-insulin ihlangana kanjani ne-hormone yokukhula?
I-insulin yi-hormone edlulisa ushukela usuka egazini uye emangqamuzaneni. Isizathu sokukhuphuka kwezinga le-insulin ligxiliwe, ushukela ocoliweyo ekudleni nge-GI ngenhla kwe-60-70. I-hormone yokukhula ineminye imisebenzi. Izinkinga ziqala lapho kune-insulin eningi. I-insulin engaphezulu, i-hormone yokukhula ephansi.
Ake sithathe isitoko. Amaphuzu asemqoka:
Ama-carbohydrate ayingozi ahlanjululwe njengalawa acutshungulwayo futhi anwetshiwe angadala ukukhula kancane.
I-GI yemikhiqizo akufanele idlule ku-60-70.
Ama-carbohydrate amahle kakhulu atholakala ekudleni kwesitshalo okuphelele.
Umthwalo we-glycemic ovela kwimikhiqizo yezitshalo zemvelo uphansi.
Uma ufuna ukukhula, kufanele uqiniseke ukuthi i-insulin ngokushesha yenza imisebenzi yayo futhi ishiya igazi.
Ukuntuleka ushukela kukhulisa ukwenziwa kwe-GR. Labo abasubathi abaqeqesha kakhulu bayakwazi lokhu. Ngakho-ke, kungcono ukudla noma yimiphi imikhiqizo enenkomba ephezulu ye-glycemic ekuseni nantambama kuze kube ngamahora ayi-16. Kusihlwa nasebusuku, i-insulin ohlelweni lokujikeleza kwegazi kumele okungenani ibe njalo ukuze kuthi lapho ilele, ama-hormone okukhula akwazi ukwenza umsebenzi wawo.
Ukudla okujwayelekile kwezemidlalo kufundeka kanje: "Ama-carbohydrate ekuseni, amaprotheni kusihlwa." Ngokuvamile, yebo, kepha ngingasho okuhlukile ngokuhlukile: "Ama-carbohydrate ekuseni, amaprotheni ntambama (noma okuphambene nalokho), futhi kusihlwa kunokukhanya okufana nemifino."
Yidla ukudla okuphansi ngangokunokwenzeka noma ulahle ukudla okunoshukela omningi, ikakhulukazi okucolisisiwe. Ngeshwa, ukudla okufana nobisi noma isinkwa sesitolo kuqukethe ushukela omningi kunokucabanga kwakho.
Zama ukugwema futhi ukugcina ama-juices kanye noswidi olugxile kakhulu olusanda kufakwa. Qaphela izinhlamvu bese uzama ukuzisebenzisa ziphelele, hhayi ukuthi zihluziwe. Izithelo ezomisiwe akufanele zidliwe ngamanani amakhulu, ikakhulukazi ebusuku.
Ezinye zezithelo ezishisayo (uphayinaphu, imango), nazo.
Uma umsebenzi ukuhlanganyela ngokungathi sína ekwakhiweni komzimba wakho, khona-ke ngokuvamile noma yikuphi ushukela kufanele kudliwe kuphela ngaphambi kokusebenza ngokomzimba. Ukudla ushukela nokuhlala kupapa kuyindlela emfushane kakhulu yezinkinga. Ngemuva kokudla okungenani konke, yenza ama-squats angama-30.
Sengiphetha, ngiphonsa umbono othokozisayo: ukuvivinya umzimba osindayo ngaphambi kokudla kudinga ubuncane be-insulin ukwenza ukudla kube lula. Lokhu, umuntu angasho, imfihlo yokugcina izinga eliphezulu le-GR yabadlali abaningi abangochwepheshe. Okusho ukuthi, ukuqeqeshwa esiswini esingenalutho kuchaziwe. Vele, inemisindo yayo, kepha ngizokutshela ngayo ngesinye isikhathi. Bhalisa futhi ufunde konke kuqala!
Yilapho ngiqeda khona! Bye wonke umuntu!
Ozithobayo, uVadim Dmitriev
Yini ukudla okunyusa ushukela wegazi?
I-glucose (ushukela) ibhekisa kwi-organic compounds. Ungumphakeli wamandla ophambili wamaseli. Ngemuva kokungena esitokisini, inqubo ye-glucose oxidation iyaqala, okuyiyo ngokubamba iqhaza komoya ophefumulayo ivumela amandla ukuba akhishwe. Imikhiqizo yokugcina ye-glucose oxidation yi-carbon dioxide (isuswe emzimbeni ngomoya oxoshwe) namanzi.
Ngokuncipha kwezinga lalesi sikhungo se-carbohydrate egazini, ukukhula kwendlala kwezicubu kukhula, lapho amaseli wohlelo lwezinzwa (ama-neurocytes) abucayi khona, ngakho-ke, umzimba unesistimu yokulawula okuhloswe ngayo ukugcina ushukela omningi njalo.
Kubandakanya ama-hormone akhuphuka (i-glucagon, i-glucocorticosteroids, i-adrenaline) nephansi (i-insulin, ebhekele ukugeleza okujwayelekile kwe-glucose kumaseli) izinga likashukela.
Umthombo oyinhloko walesi-carbohydrate ukudla, ngoba kubantu azikho izindlela zokuqanjwa kweglue glucose.
Kungani kudingeka wazi ukuthi yikuphi ukudla okuandisa ushukela?
Ukudla okungapheli kwenani elithile lama-carbohydrate ngokudla kuholela ebukhoneni bamandla atholakele ngaphezulu kokudliwayo.
Lesi yisizathu sokuqala kokuqongelelwa kwamandla ngesimo samafutha, ahlanganiswe ngokwenziwe ushukela omningi, ngokuthuthuka okulandelayo kokukhuluphala.
Futhi, okuqukethwe okuphezulu kwe-carbohydrate ekudleni kuholela esikweni esandayo sikashukela, esibangela ukwanda kokuqalwa kwe-pancreatic insulin.
Lesi simo siholela ekutheni ama-receptors amaselula alahlekelwe umuzwa we-insulin, futhi lokhu, kuyindlela eyinhloko yokwenziwa kwesifo sikashukela. Ngakho-ke, ukuphathwa kokudla kwalezi zingxube emzimbeni ngokudla kuyisisekelo sokudla okunempilo nokuvinjelwa okufika ngesikhathi kwezifo ezithile, okubandakanya:
Isifo sikashukela kanye nokunye ukuphazamiseka emzimbeni
Ukwehla kobukhulu obuhlukahlukene, okuhambelana nenani nobude bokudla ushukela.
I-Atherossteosis ukwephulwa kwe-carbohydrate kanye ne-fat metabolism, ebonakala ngokwanda kwe-cholesterol yegazi nokufakwa kwayo okuthe xaxa ezindongeni zemithambo yegazi ngendlela yama-plaipleheroticotic, anciphisa i-lumen yemithambo yegazi.
Ukulawulwa kwe-carbohydrate kubaluleke kakhulu kubantu abanezifo ezihlukahlukene ze-metabolic. Lokhu kukuvumela ukuthi unciphise izinga labo legazi ngenani elithile ngaphandle kokusebenzisa izidakamizwa ezonciphisa ushukela.
Futhi, esimweni sokusetshenziswa kwaleli qembu lezidakamizwa noma injekishini ye-insulin (esetshenziselwa uhlobo lwe-1 yesifo sikashukela mellitus, ebonakala ngokuphula umthetho wokukhiqizwa kwe-insulin emzimbeni wamanyikwe), ukulawula ukuthathwa kweshukela emzimbeni ngokudla kuzonciphisa umthamo wabo.
Endabeni yokuncipha okukhulu koshukela (okuvame ukwenzeka ngenxa yokuntuleka kwesikhathi eside kokudla, i-drug overse-okwehlisa ushukela noma i-insulin), ukuthatha ukudla okune-glucose ephezulu kuzolibuyisela ngokushesha izinga lakhe egazini.
Yini ukudla okunyusa ushukela?
Uhlu lokudla oluqukethe inani elithile lama-carbohydrate lilingana impela. Ibandakanya ikakhulukazi imikhiqizo ehlukahlukene yemvelaphi yezitshalo, kanye ne-confectionery nemikhiqizo kafulawa.
Inani elikhulu likashukela litholakala kumaswidi, kuyilapho kumunwa kalula bese liqala ukugxiliselwa egazini elivele lisemgodini womlomo. Ngakho-ke, amaswidi asetshenziswa uma kunesidingo sokwandisa ushukela wegazi ngokushesha.
Ukudla okusemqoka kokuqinisa ushukela kufaka phakathi:
Iqembu lomkhiqizo Izinhlobo eziphambili zama-carbohydrate atholakala ekudleni Abamele Iqembu Lomkhiqizo
Imikhiqizo yobisi Kuqukethe i-lactose (ushukela wobisi), okuthi emzimbeni iphenduke ushukela Ubisi, ukhilimu omuncu, ubisi olubilisiwe olubilisiwe
Izithelo Ziqukethe inani elibalulekile lezinto ezinhlobonhlobo zama-carbohydrate (i-fructose, ushukela) Apricots, peach, ubhanana, ikhabe, i-grapefruit
Izitshalo zamabele Ama-carbohydrate ahlukahlukene ahlukahlukene, ikakhulukazi isitashi Imikhiqizo yokubhaka, muffin, amakhukhi we-gingerbread
Eminye imifino Ziqukethe isitashi, esidonswa lapho emathunjini ngaphambi kokuba ushukela ungene egazini. Ubhatata, i-parsnip
I-Confectionery Umthombo wama-carbohydrate ahlukahlukene okugaya kalula ngesimo se-monosaccharides ne-disaccharides (ushukela, i-fructose, i-galactose, imaltose) Amaswidi, amakhekhe, ushokoledi, ama-marshmallows, ama-jellies, amakhekhe
Inani elikhulu kakhulu lama-carbohydrate atholakala kushukela, amelelwa kuwo ingxenye enkulu yi-sucrose disaccharide. Kukhona nemikhiqizo engakhuphi izinga lama-carbohydrate egazi. Zibandakanya ikakhulu i-fiber yemifino, inyama ebusayo (unogwaja, inkukhu) nenhlanzi.
Yini amayunithi esinkwa?
Ukudla okwephulwa kokwenza ushukela emzimbeni, kuhambisana nokwanda kwezinga laso, kufaka phakathi ukusetshenziswa kwamayunithi esinkwa. Lesi yisinkomba esinemibandela esibonisa inani le-glucose (12 g), eliqukethwe ucezu lwesinkwa esisodwa.
Ngomkhiqizo ngamunye wokudla, inani layo lamayunithi esinkwa ngobungako obuthile bawo liyahambelana. Kunetafula elikhethekile lapho kwethulwa khona uhlu lwemikhiqizo yokudla enenombolo yamayunithi wesinkwa abakulo.
Ngenxa yalokhu, umuntu, enza imenyu, unethuba lokuhamba ngesilinganiso se-glucose enikezwe ngokudla.
Uma kunelinye izinga le-glucose elandayo emzimbeni, izincomo ezinemininingwane eminingi zinikezwa yi-endocrinologist kanye nomondli wezempilo ngamunye. Kuya ngeminyaka, ubulili nohlobo lomsebenzi womuntu, kanye nezindleko zamandla ezihambisanayo.
Ama-glucose egazi (ushukela) ama-hormone
Umuntu ngezikhathi ezithile zokuphila angahlushwa isifiso esithe xaxa sokudla into emnandi nekhalori ngokweqile. Abesifazane bazizwa isidingo semithamo emikhulu yama-carbohydrate engxenyeni yesibili yomjikelezo wokuya esikhathini.
Odokotela bayayichaza le ndaba ngomsebenzi wamaqanda, abaphelelwa amandla okukhiqiza kahle ama-hormone futhi bagcine okuqukethwe kwabo okujwayelekile. Lesi sithombe sikhulu njengoba kusondela izindlela zokuya esikhathini.
I-Insulin Resistance kanye ne-Syndrome X
I-hormone i-insulin yi-anabolic eyinhloko ebhekene nokudla okujwayelekile emzimbeni. Ngaphezu kwalokho, i-insulin ilawula izici eziningi:
Umuntu angafa ngenxa yokuntuleka njalo kwama-hormone, ngoba kuyadingeka ekuletheni ushukela ongaphazanyiswa usuka egazini uye ezingqamuzaneni. Bazisebenzisa njengamafutha ukuze babe khona okujwayelekile futhi bakhipha ushukela omningi engxenyeni yamafutha. Uma kunesidingo, ama-triglycerides agcinwe asetshenziswa njengamandla.
Ngokungafani nemiphumela ye-anabolic ye-testosterone (i-hormone eyinhloko yabesilisa), esetshenziselwa ukwakha izicubu zomzimba nethambo, i-insulin igcina amanoni.
Le hormone iyisisusa esinamandla se-lepenagenis (ukuguqulwa kwezakhi ezinamafutha) kanye nesithiyo esinamandla se-lipolysis (ukuqhekeka kwamafutha).
Ngenxa yesenzo se-insulin, iphesenti lemisipha namafutha liyanda. Ngokukhuthaza kwe-insulin, inani lamaseli emisipha liyancipha futhi inani lamafutha angaphansi kwe-subcutaneous liyakhuphuka.
Ngokweqile kwe-insulin, owesifazane uzohlala ehlushwa isisindo ngokweqile, okunzima kakhulu ukusikhipha, ikakhulukazi lapho esemdala.
Izimpawu ze-Insulin Eqile
Kunezimpawu ezithile zokuqoqeka ngokweqile kwe-insulin ye-hormone:
ukucindezelwa okungapheli (i-hormone yokuxinzelela - i-cortisol iyakhula),
ukusetshenziswa njalo kokudla okungenamsoco (okunotha ama-carbohydrate angenalutho),
umsebenzi we-thyroid owanele,
ukuntuleka kwe-estradiol (ihomoni enkulu yabesifazane),
I-testosterone ephezulu kakhulu (i-hormone yabesilisa).
Njengomthetho, uma kukhuphuka izinga likashukela wegazi, inani le-insulin elidingakalayo ukuyihambisa ligudluze egazini liye emisipha noma endaweni yokuqongelelwa likhiqizwa.
Ngokuhamba kwesikhathi, futhi njengoba kufakwa amafutha, ama-insulin receptors aqala ukusebenza kubi kakhulu. Amangqamuzana kashukela akakwazi ukubopha ngokwanele kuwo. Uma lokhu kwenzeka, lapho-ke ngemuva kokudla amazinga eglucose uhlala ephezulu kakhulu. Isizathu ukuthi i-insulin, yize ikhona egazini, ayinawo umphumela ohlosiwe.
Ama-receptors we-Brain aqaphela njalo amazinga kashukela egazi futhi athumela amasignali afanele kumanyikwe ukuze akhiphe i-insulin ethe xaxa ukuze azinza. Amaseli kanye negazi kuyachichima nge-hormone, futhi lapho nje kuqala ukusebenza, ushukela usakazeka ngokushesha emzimbeni, obangela i-hypoglycemia.
Ku-mellitus yesifo sikashukela, ukuzwela okunganele kwe-insulin kungaqapheleka, okubuye kwandise isimo.
Ukuphikiswa (ukumelana) yisimo lapho kunokwanda kwezinga le-insulin noshukela wegazi. IGlucose iqongelela uhlobo lwamafutha esikhundleni sokuyisebenzisa njengamandla. Ngenxa yokuthi i-insulin ye-hormone ayinakuba nomphumela ofanele ekusebenzeni kwamaseli emisipha, umphumela wokungatholi inani elifanele lokudla uqhamuka.
Ngasikhathi sinye, amangqamuzana awantula uphethiloli odingekayo, futhi umzimba uhlala uthola izibonakaliso eziphathelene nendlala. Lokhu kwenzeka ngaphandle kokuqukethwe okwanele kanye nezinga le-glucose egazini.
Ngokuhamba kwesikhathi, kudingeka inani elikhulayo lokudla, futhi ngenxa yenani elikhulu le-insulin, amafutha aqongelela emzimbeni, ukukhuluphala kancane kancane kuyavela futhi ukukhuluphala kuyanda. Ngisho nemizamo yokuzethemba yokuguqula izinqolobane zama-depot wamafutha ibe amandla kwezicubu zemisipha ayinikezi imiphumela oyifunayo. Lapho lesi sifo siqhubeka, izinkinga zesisindo zanda kuphela.
Ngokuzwela okunganele kwe-insulin, owesifazane uyagcwala, ngisho nangasemuva kokungondleki kahle.
Ngaphezu kwalokho, ukumelana ne-insulin kuyacasula:
ukuncipha okukhulu kokuvikelwa komzimba, okwenza ukwanda kokutheleleka kwezifo,
ukuvela okusebenzayo kwama-plaque odongeni lwemithambo yegazi,
ukwanda okwakhayo kwamaseli wemisipha ebushelelezi emithanjeni, kusiza ukunciphisa ukuhamba kwegazi kwizitho ezibalulekile,
ukunamathela okukhulu kwamapuleti anengozi ekhulayo ye-thrombosis (ukushayisana kwegazi kungadala ukufa).
Izinqubo ezifanayo ze-pathological zithinta kabi imithambo yegazi. I-insulin engaphezulu ngokumelene nesizinda sokuqukethwe kwe-estradiol ephansi ibhekwa ngodokotela njengethuba eliphezulu lokuthola ukugula kwezifo zenhliziyo nokuhlaselwa kwangaphambi kwesikhathi.
Izinkinga emzimbeni zinegalelo ekuthuthukisweni kweSystem X, isifo esibucayi ikakhulukazi esidalwa yizinkinga ze-metabolic. Njengomthetho, abesifazane banalesi sifo. Kwandisa ukwanda kwesifo sikashukela nokufa.
Inhlanganisela ebulalayo yezimpawu:
ukhuluphele, ikakhulukazi okhalweni nasiswini,
cholesterol yegazi ngokweqile,
E-inthanethi nakumaphephabhuku ezokwelashwa ungathola igama elehlukile - i-W syndrome. Kufanele kuqondwe ukuthi:
ukhuluphele kubantu besifazane,
ukuzungeza okhalweni okungamasentimitha angama-88,
ukuphikelela kwengcindezi nokukhathazeka.
Uma i-estradiol ilungile, khona-ke amathuba ezinkinga zokuzwa okunganele kwe-insulin kuncishisiwe. Lokhu kungenxa yamandla wehomoni yabesifazane ukuthuthukisa ukusabela kwe-insulin kumaseli womzimba. Ukuntuleka kwalo kuyimbangela yokungasebenzi kahle kwama-ovary.
Umphumela we-insulin kuma-receptors alesi sitho sangasese ushintsho olunjalo kuma-enzyme e-ovari, lapho inani le-androgen lenyuka khona. Ngasikhathi sinye, ama-hormone estradiol ne-estrone awakwazi ukunakekelwa ngezinga elifanele.
Ngokugcwala ngokweqile kwe-androgens emzimbeni wowesifazane, ukungalingani kwe-hormonal kuzokwenzeka nezinkinga nge-insulin.
Ukusebenza kakhulu kwe-insulin egazini, kuyasebenza ngokwengeziwe ukukhuthaza ama-androgen akhiqizwa amaqanda. Lo mbuthano onobunzima kunzima impela ukuwaphula, futhi umuntu wesifazane ugcwala njalo ngonyaka.
Ukwanda kwesisindo phakathi kwamantombazane amancane nabesifazane abasebasha kuyabonakala ikakhulukazi. Le nqubo yandisa ingozi yokukhubazeka.
Uma i-insulin ye-hormone ingekho ekuhlolweni okwanele, khona-ke isongela ukuthi izinga likashukela wegazi lizokwehla.
I-Hypoglycemia nokungabekezeleli ushukela
I-Hypoglycemia kufanele iqondwe njengeqoqo eliphansi kakhulu likashukela wegazi. Imvamisa lesisimo se-pathological sihlobene ngqo nezinkinga zokulawula izinga elanele likashukela emzimbeni. Odokotela babiza lesi simo ngokungabekezeleli.
Zombili lezi zinto ezingasebenzi kahle emzimbeni ziyizigaba zokuqala kakhulu zesifo sikashukela. Udokotela angahlonza i-hypoglycemia inqobo nje uma ushukela wegazi ungaphansi kwe-50 mg / dl. Kwezinye izimo, izimpawu ze-hypoglycemia nazo zingabonakala ngenani le-glucose ephezulu, ikakhulukazi uma okuqukethwe kwayo kuncishisiwe.
Ngenxa yokuthi i-glucose inguphethiloli obalulekile wamaseli obuchopho, ama-receptors ayo enzelwe ukuxwayisa umzimba ngezinkomba ezanele zoshukela (ukwehla kwawo ngokushesha noma izinga eliphansi ngokweqile).
Leli phethini lichaza ukuthi kungani, ngezimpawu ezisobala ze-hypoglycemia, ukuhlolwa koshukela akukuqinisekisi, kukhombisa ushukela ojwayelekile. Kungenzeka ukuthi kwehle ngokushesha ezingeni elibucayi, lapho ubuchopho buthola i-alamu noma ngabe isisindo sangempela sikashukela siphezulu kunokwejwayelekile.
Imishini efanayo isebenza ngezimpawu ze-hypoglycemia ngokushesha ngemuva kokudla. Ukukhiqizwa okwenziwe i-insulin kubangela ukusetshenziswa kwama-carbohydrate amaningi ahlanzekile.
Ungakuvimbela kanjani ukwephulwa emzimbeni?
Owesifazane kufanele alandele imiyalo eminingana ezosiza:
gcina isilinganiso esanele se-glycemia,
lungisa ukubekezelela ushukela,
phatha ukumelana noshukela wegazi kanye noshukela.
Ungaphuma ogibeni okuthiwa yi-insulin usebenzisa inhlanganisela efanelekile yamaprotheni, amafutha kanye ne-carbohydrate.
Ngaphezu kwalokho, kufanele ukhumbule ama-nuances alandelayo.
Ukuphindaphindwa kwesidlo kanye nesikhathi
Nsuku zonke kufanele kudliwe yiwashi. Futhi akufanele sikhohlwe ngokuqhekeka.
Uma udla ngezikhathi ezahlukahlukene zosuku futhi ezingxenyeni ezinkulu, ikakhulukazi kusihlwa, khona-ke lokhu kuyimfuneko yokuqala yokukhiqizwa kwenani elikhulu le-insulin nokubekwa kwamafutha.
Kwenqatshelwe ukusebenzisa ukudla kwe-carbohydrate ephezulu okwandisa amazinga e-insulin.
Noma yimuphi umsebenzi womzimba ungabizwa ngokuthi yi-insulin. Kuyasiza ukuletha i-glucose emisipha futhi kwehlise izinga layo eliphakeme egazini.
Ukuzivocavoca kwesifo sikashukela i-mellitus kusiza kakhulu ukuxazulula inkinga yokumelana ne-insulin futhi kunomthelela ekushisweni kwezinga eliphezulu kwamafutha omzimba. Lokhu kuzonikeza ithuba lokuthola amandla, kwakha izicubu zomzimba bese ngokwenza lokho kusheshise izinqubo ze-metabolic emzimbeni.
Kubalulekile ukulawula amazinga e-hormone. Le ndlela izosiza ukulawula inani lamafutha emzimbeni nasendaweni yayo ethile. Kungenzeka ukwakha izicubu zomzimba nokusheshisa imetabolism, inqobo nje uma ibuyiselwa:
Indima ebalulekile kule nqubo inikezwe ukusebenza okujwayelekile kwe-yegilo yegilo.
I-hormone enciphisa ushukela olawula ushukela wegazi
I-metabolism ye-Energy yenziwa ngokwesikimu esiyinkimbinkimbi, kuyilapho i-hormone esehlisa ushukela wegazi idlala enye yezindima eziphakathi nendawo. I-glucose ibandakanyeka ngqo ekushintsheni kwe-metabolic, ikakhulukazi eyimfuneko ekusebenzeni kobuchopho. Umthombo we-glucose ukudla, lapho isilinganiso samandla sehlukile.
Umqondo ojwayelekile wama-hormone
I-hormone esehlisa ushukela wegazi ibizwa nge- insulin. Ikhiqizwa yinto ye-cortical ye-pancreas ngesicelo sobuchopho, inemvelo yamaprotheni futhi inomphumela osheshayo.
Ukuze wehlise ngokushesha amazinga aphezulu, amaseli we-gland ahlala equkethe insulin encane. I-molecule yento iqukethe amaketanga ama-2: ikhethini elifushane le-A lama-21 ama-amino acid kanye noxha olude lwezinsalela ezingama-30. Amaketanga axhumene namabhuloho angenasisekelo.
Imisebenzi ye-insulin ingaba ngale ndlela elandelayo:
Umuthi usebenza amandla we-enzyme ukudiliza izingxenye zokudla.
I-insulin, ehlisa ushukela, iyadingeka ukuze kudluliselwe ushukela esitokisini, okungukuthi, isebenza njengohlelo lokuhamba. U, njengohlelo lokukhiya ukhiye, ujoyina i-molecule ehambelana noshukela bese eyingenisa esitokisini.
Ebamba ushukela omningi egazini, ulithwala ngaphakathi kwamangqamuzana anamafutha agcina ushukela othize, isibindi sisebenzise.
I-insulin ivuselela i-lipogenesis, ngakho-ke abathanda amaswidi bathola amafutha: i-insulin ithwala ushukela emangqamuzaneni amafutha. Umphumela wesibili wezicubu ze-adipose ukwehlisa ukuqhekeka kwawo.
Ivimbela ukwephulwa kwamaprotheni.
Kushukumisa umsebenzi we-pituitary gland.
Ezilungwini ezahlukahlukene, ukuzwela kwento kuhlukile:
Isibindi, izicubu zomsipha kanye nama-cell cell adinga ukuba khona kwe-insulin, okungukuthi, kuyayizwela.
Ubuchopho, izinzwa zezinzwa, i-vascular endothelium ne-adrenal medulla ayamelana ne-hormone, okungukuthi, abayidingi njengohlelo lokuthuthwa kokudluliswa kweglucose.
Izicubu nezitho ezisele zinokuzwela okuhlobene.
Ngomqondo, ukuntuleka kwesidingo se-insulin ukusabela kokuvikela komzimba: lapho ushukela wehla ufinyelela ezingeni elithile, ukuhlanganiswa kwe-insulin kuyeka, bese kuthi lapho sekufika umthombo we-carbohydrate osheshayo, ngeke kwenzeke ukuletha amandla ebuchosheni.
Ukuthuthukiswa kwesifo sikashukela kwenzeka ngenxa yezizathu ezimbili:
noma ngabe i-hormone ayikhiqizwa ngokwanele
noma amathuba okuthi abophe i-glucose akhubazekile.
Isibonakaliso sokuthi izinto ezikhulisa izinga le-glucose azitholi igoli umuzwa wendlala, isifiso sokudla into emnandi.
Ama-hormone amaningana athinta i-carbohydrate metabolism: i-insulin, ehlisa ushukela, kanye nabamelene nayo (i-adrenaline, i-glucagon, i-hormone yokukhula, i-glucocorticoids).
Lokhu yilokho okwenzayo: lapho kuvela izimo zokukhiqizwa kwamahomoni we-contra-hormonal, ikhono le-hormone lokunciphisa ukulawula ushukela liyancipha.
I-Adrenaline inyusa amazinga e-glucose imizuzu eyi-10, i-glucagon cishe ihora, ama-glucocorticoids izinsuku eziningana, kanye ne-glucagon kuze kube izinyanga ezimbalwa.
Ukudla okunama-carbohydrate asheshayo kuyingozi ethile emzimbeni: aqukethe ushukela omningi, ongena ngokushesha egazini.
Ukwehlisa izinga akunakwenzeka ngokushesha, ngoba isikhathi siyadingeka ekuhlanganiseni kwe-insulin.
Uma isikhathi esithile ukudla komuntu kuqukethe imikhiqizo enjalo, khona-ke ukukhiqizwa okuqhubekayo kwe-insulin kubangela ukufa kweziqithi zeLangerhans, okuholela kwisifo sikashukela.
Inani nenani le-insulin elakhiqizwa ngumzimba lithinteka ngohlobo nobungako bokudla, isidingo samanje, izinga nezinga lokufakwa.
Isikimu sayo yonke inqubo sinje:
Ngemuva kokudla, iyaqhekeka, ihlukanise kuyo izinto ezidingekayo zomzimba: amavithamini, izakhi ezilandelwayo, ushukela.
Zonke lezi zinto zingena emgodini wegazi futhi zihanjiswa lapho zidingeka khona. Ngenxa yalokho, ezinye zazo zihlala zigcwele egazini.
Ushukela omningi uthuthwa esibindini futhi ugcinwe lapho njenge-glycogen. Uma umuntu engakutholi ukudla isikhathi esithile, khona-ke izinga likashukela eliphansi liyabuyiselwa. Ukwanda kwe-glucose kwenzeka ngenxa yokuqhekeka kwesitoko esivela edepho.
Ngokwenyuka okukhulu kwesilinganiso, izinso ziyeka ukunikeza ukubuyiselwa okubucayi kwalo lonke ushukela egazini, bese kungena umchamo. Lo mkhawulo kumuntu osemdala ubekwa ku-10 mmol / L.
Kukhona ukuxhumana phakathi kwesisindo somuntu neleveli ye-insulin: uma izicubu zomzimba zibekwa ngaphezulu kwamafutha, khona-ke amandla amaningi ayadingeka ukuqinisekisa ukusebenza kwawo. Ngakho-ke, i-hormone inciphisa ushukela isikhathi esifushane futhi ukugxila egazini kuncane. Kumuntu onesifo sokukhuluphala, noma ngesikhathi sokudla, inkomba ye-insulin elawula izinga loshukela ingaphezu kwesilinganiso.
Ukumelana ne-insulin yinto enkulu lapho umzimba ukhulisa ukukhiqizwa kwento esizayo. Lokhu kwephulwa kuhlotshaniswa nokushintshwa kwendlela yokuqamba yenani elidingeka kakhulu le-insulin.
I-glucose ayikwazi ukungena kumaseli, okusebenza njengesibonakaliso sesidingo samaseli amaningi okuhamba. Ngenxa yalokhu, igazi liqukethe ushukela omningi kanye ne-insulin, okuholela ekufutheni ukukhuluphala.
Njengoba i-insulin ikwazi ukwehlisa inani le-lipolysis, umzimba awutholi ushukela noma ekudleni noma edepho, obambezela imetabolism.
Nayi eminye imiphumela yokumelana ne-insulin:
ukukhuluphala kwesisindo noma ukudla kancane,
ubunzima bokukhipha amakhilogremu angeziwe,
isifo sikashukela ekuhambeni kwesikhathi.
Izinga le-insulin liyohlala likhuphuka kakhulu ngemuva kokuthatha ubisi, ushizi wekhokho, inkukhu, amaqanda. Ukuvuza okunjalo akuholeli ekuwohlokeni kwempilo yabantu.
Ukuze uqonde umshini owenyusa futhi wehlise isisindo, kuyadingeka ukukhumbula ukuthi imijikelezo yomsebenzi we-insulin nokunye kungenziwa.
Ngesikhathi sokulondolozwa, izicubu ze-adipose zigcinwa, futhi phezu kokuqedwa kwaso, ukubhujiswa kwenzeka, i.e. ngemuva kokudla, emva kwesikhathi esithile, izinga le-insulin lizokwehla, bese inqubo yokuqalwa kwe-lipolysis iqala. Ngokuncipha kokuqukethwe kwekhalori yokudla, umzimba uzokwehla.